यसकारण आमाले भारतीलाई जन्माउन चाहन्थिनन्, तर आज उही भारती बनिन् भारतकी हाँस्य रानी ! – AB Sansar
यसकारण आमाले भारतीलाई जन्माउन चाहन्थिनन्, तर आज उही भारती बनिन् भारतकी हाँस्य रानी !
December 9, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on यसकारण आमाले भारतीलाई जन्माउन चाहन्थिनन्, तर आज उही भारती बनिन् भारतकी हाँस्य रानी !
एजेन्सी । भारतीय हाँस्य कलाकार भारती सिंहको जीवन संघर्ष सुन्दा जो कोहीको पनि आखाँ रसाउँछ । भारती जन्मनु अघि नै उनले आफ्नो जीवन संघर्ष आमाकै पेटमा छँदादेखि नै गर्नु परेको कुरा जब सुनाईन् तब उनका कुरा सुन्ने त भावुक भए भए साथै उनि पनि । *** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***
Breaking news : सुनको मुल्यमा इतिहासमै पहिलो पटक यतिधेरै घट्यौ
इजरायली अन्तरिक्ष विशेषज्ञको दाबी : मंगल ग्रहमा एलियनको अखडा, ट्रम्प पनि जानकार !
कलेज ट’प गरेकी ऐ’श्वर्या: परिवारले आफ्नो पढाइको लागि ल्यापटप किन्न नसक्दा गरिन आ’त्म’ह’त्या !